Degso Rat Simulator loogu talagalay Windows
Degso Rat Simulator
Degso Rat Simulator,
Simulator Rat waxaa lagu qeexi karaa ciyaar badbaado leh oo leh ciyaar xiiso leh oo u oggolaaneysa ciyaartoydu inay yeeshaan khibrad ciyaar xiiso leh iyagoo beddelaya jiir.
Ciyaartaan jilitaanka ah oo aad ku ciyaari karto kombiyuutarradaada, ujeedkayaga jiir ahaan waa inaan ku faafinno microbes -ka aan qaadno meelaha ay dadku ku nool yihiin iyo inay ku noolaadaan xatooyada cuntada. Laakiin helidda cunto ma aha waxa kaliya ee aan u baahannahay inaan sameyno si aan u badbaadno; maxaa yeelay dadka argagaxa marka ay ku arkaan waxay u yeerayaan kooxaha ka saarista cayayaanka. Markaan aragno kooxaha ka saarista cayayaanka, waa inaan cararnaa oo isqarinaa.
Markaan isku dayeyno inaan ku abuurno jannada jiirka jiirka jiirka, waxaan ka heli karnaa jiir kale oo aan ku qori karnaa ciidankeenna. Ciyaarta ay asturnaanta safka hore kaga jirto, waxaa sidoo kale naloo oggol yahay inaan burburinno deegaanka. Waxaan riixi karnaa oo garaaci karnaa oo burburin karnaa waxyaabaha qiimaha leh sida taargooyinka, muraayadaha, dhalooyinka. Si loola dagaallamo dadka, waxaan sumayn karnaa cuntada annagoo ku sumaynayna cuntada microbes -ka. Waxaan sidoo kale wanaajin karnaa jiirkayaga markaan ku sii soconno ciyaarta.
Shuruudaha nidaamka ugu yar ee Simulator Jiirka waa sida soo socota:
- processor -ka AMD oo leh 2.4 GHz Intel Core 2 Duo ama u dhigma
- Nvidia GeForce 760 GTX ama kaararka garaafyada ee AMD Radeon HD 5870
- 3GB ee kaydinta bilaashka ah
- Kaadhka codka ee tooska ah ee DirectX
Rat Simulator Noocyada